Karlskrona waxeey ku taala bada agteeda ee dhinaca bari-konfureedka Iswiidhan. Magaalada waxeey ku dhisan tahay jasiiradooyin, waxeeyna uu dhawdahay jasiirado yaryar iyo baadiyaha. Degmada waxeey lee dahay xaafado badan oo leh adeeg fiican. UNESCO ayaa magaalada ku magacaawaday mid taariikhi ah laakin isla markaas Karlskrona waa degmo casri ah oo leh jawi ganacsadeed oo koraayo iyo hey’adda dowloadeed oo badan o shaqo dhiibe ah.
Shirkada guriyaha Karlskronahem waa shirkada guriyaha ee ugu weeyn. Meelo badan oo degmada ka tirsan waaa laga dhisooyaa guriyaal. Xaafad dhan oo cusub, Pttholmen, ayaa bilabi doonaa in la dhiso 2015 ayadoo la qorsheeyay in laga dhiso 440 guri bada agteeda.
In kale oo ku saabsan guri Karlskrona ka akhriso bogga degmada.
In ka badan 130 dhalasho ayaa joogo Karlskrona. Luuqada ugu weeyn ee degmada waa af carabi, af soomali, afka albaaniyo, afka serbooy-koreeshiya.
Karlskrona waxeey taajir ka tahay dhinaca jawiga urureed oo waxeey lee dahay ka badan 300 oo urur. Laga bilaaba ururo isboorti, ururo bulsho, ururo dhaqan iyo ururo diimeed.
Akhriso in kale oo ku saabsan jawiga urureed ee Karlskrona.
Adeega-bulshadeed sidii warbixin-degmada, xafiiska shaqada, xafiiska adeega bulshada, qasnada ceeymiska, maktabad iyo xafiiska canshuuraha waxeey ku yaalaan Karlskrona. Bartamaha waxaa badan ayaa ku soo bandhigan oo dukaamo, carwo iyo maqaayado. Magalaada dibadeeda waxaa ku yaalo suuqaq badan. Sido kale waxaa jiro dhowr dukaamo-gacan-labaad ah oo laga adeegan karo dhar, maacuun iyo alaab guri oo rakhiis ah.
Degmada Karlskrona waxeey lee dahay howl xanaandeed oo dhiisan looguna tala galay caruurta ku jiro da’da 1 ilaa 5 sano. Waxaa jiro dugsi xanaanado ee degmada lee dahay iyo kuwo madax banaan. Sido kale waxaa jiro dugsiyaasha xanaanada maalmeedka.
Akhriso in kale oo ku saabsan dugsiyada xanaanada ee Karlskrona.
Degmada Karlskrona waxaa ku taalo 38 dugsi hoose-dhexe oo leh ku dhawaad 7000 oo arday. Sideed ka mid ah dugsiyada waa kuwo madax banaan. Waxaa jiro jiheeyn waxbarasho oo badan oo kala duwan. Sido kale waxaa jiro dugsiyaal sare ee degmada lee dahay iyo kuwo madax banaan.
Akhriso in kale oo ku saabsan dugsiyada hoose ee Karlskrona.
Akhriso in kale oo ku saabsan dugsiyada sare ee Karlskrona.
Dugsi waxbarashada dadka waa weeyn iyo waxbarashada iswiidhiska ee soo galooytiga waxaa laga helaa Waxbarashada dadka waa weeyn ee Karlskrona, halkaasi oo sido kale lagu dhiiba waxbarashada ayadoo la fiirinaayo baahidaada, waxbarashadana lagu dhigan karo si isbad-baddelid leh oo la adeegsanaayo waxbarashada-masaafada ama waxbarasho lagu dhigaayo fasal gudihiis, maalin ama habeen.
Dugsiga dadka waa weeyn Litorina waxuu lee yahay astaan-Bada Öster, taasi oo mecneheed tahay in ardayda wax ka baranaayo sido kale loo dhigaayo waxbarasho ku saabsan dalalka iyo dadka hareero badaÖster.
Jaamacada Farsamada Blekinge, BTH, waxeey ka mid tahay jaamacada Iswiidhian ugu astaan badan, ayadoo xooga la saaraayo elegtroonigada iyo fikrado cusub ee loogu tala galay kobicd jogeeyso.
Akhriso in kale oo ku saabsan waxbarashada dadka waa weeyn
Waxbarashada dadka waa weeyn ee Karlskrona
Jaamacada Farsamada Blekinge
Xaafada dhexe waxaa waxaa ka jiro ruggag caafimaad oo badan, sido kalena rugta caafimadka caruurta, rugta caafimaadka hooyoyinka iyo isbitaalka Blekinge. Maamulka gobolka Blekinge ka ka howl galo daryeelka-bukaanka. Talobixinta caafimaadka 1177 waxaad weeydiin karto su’aalo, ka heli karta talo kana heli kartaa warbixin la isku soo aruuriyay oo ku saabsan daryeelka caafimaadka iyo bukaanka Karlskrona. Waxaad booqan kartaa bogga 1177 ama wici kartaa lamabarka telefoonka 1177.
Akhriso in kale oo ku saabsan Maamulka Gobolka Blekinge.
Waxaad xaq uu lee dahay in aad hesho caawinaad-turjumaan markii aad xariir la yeelaneeyso hey’adda dowlada dhamaantood.
Haddii aad uu safreeyso ama uu safreeyso Karlskrona waxaad qaadan kartaa tareenka uu socdo Malmö/Köpenhamn ama dhinaca waqooyi oo ku socdo Stockholm ama Göteborg. In Karlskrona uu jirto sadax mayl waxaa ku yaalo madaarka Ronneby oo leh dulimaad tago Madaarka Bromma iyo Arlanda gudaha Stockholm.
Gudaha Karlskrona waxaad ku dhexraceeysaa Gaadiidka-Blekinge. Gaadiidka sii fiican ayuu dhisan yahay, ayadoo la kaashanaayo boggag iyo abyal waa sahlan tahay in la helo jadwalka-socdoka iyo bas saxsan. In kale ka akhriso bogga Gaadiidka-Blekinge.
Karlskrona waxeey lee dahay suuq shaqo oo kala duwan, laga bilaabaa isbitaalo ilaa shirkado caalami ah oo guul gaaray. Shaqo dhiibaha weeyn waxaa ka mid ah tusaale ahaan ABB High Voltage Cables, Dynapac, Roxtec, Degmada Karlskrona, Ericsson, Saab Kockums, Auralight och Maamulka gobolka Blekinge. Hey’adda dowladeed Difaaca-bada, Wasaarada difaaca, Hey’adda degaankana waa shaqo dhiibe weeyn.
Qofkii rabo in uu shirkad gaar ah furto, waxaa jirto xarunta-bilaabida-shirkadeed, in kale ka sii akhriso bogga Karlskrona xarunta-bilaabida-shirkadeed.
Ridlärare till Karlskrona - Lyckå Ridklubb Ridinstruktör/Ridlärare
Extrajobba med hjälp inför Högskoleprovet , Mörarp Jobbcoach/Utbildningscoach
Ekonom 75% Redovisningsekonom
Myndighetshandläggare , vikariat Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Polismyndigheten söker två hittedjurshandläggare till Karlskrona Servicehandläggare
Butikssäljare Cubus Karlskrona Wachtmeister Galleria (Deltid) Butikssäljare, fackhandel
Undersköterska till akutmottagningen i Karlskrona Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Sjöstridsskolan i Karlskrona söker drifttekniker till NautS IT-tekniker/Datatekniker
Butikssäljare med saldoansvar 70% Butikssäljare, fackhandel
Avdelningschef för patientadministrationen och tolkcentralen Administrativ chef
Säljare sökes Butikssäljare, fackhandel
Säljare omgående till vårt team i Karlskrona. Fast Lön plus provision. Hemförsäljare
2 st Ställningsmontörer Ställningsbyggare
Fordonsmekaniker med elkunskaper till kund Lastbilsmekaniker
Junior elmontör sökes för arbete i norra Skåne Elmontör
Avtalssamordnare till fastighetsavdelningen Fastighetsekonom
Technical Product Engineer - Assistant TPM Civilingenjör, maskin
Perfekt extrajobb! Danslärare på Funkykidz & Bliss Dance Academy! Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Bogga 1 ee ka mid ah 17
1 046 km2
Köpenhamn 247 km
Linköping 304 km
Göteborg 348 km
Stockholm 497 km